शाहरुखको छोरा आर्यनका लागि ऋतिक रोशनले लेखे यस्तो खुला पत्र - Nilo Khabar
Home समाचार शाहरुखको छोरा आर्यनका लागि ऋतिक रोशनले लेखे यस्तो खुला पत्र
एजेन्सी । शाहरुख खानका छोरा आर्यन खान यतिबेला कठिन परिस्थितिको सामना गरिरहेका छन्। आर्यन क्रुज जहाजमा ड्र ग्स पार्टी गरेको आरोपमा शनिबार २ अक्टोबरदेखि एनसीबीको हिरासतमा छन्। अब ऋतिक रोशन आर्यनको समर्थनमा आएका छन् । उनले आर्यनको सपोर्टमा खुला पत्र लेखेका छन् ।
ऋतिक रोशनले आफ्नो इन्स्टाग्राम अकाउन्टमा आर्यनको फोटो सेयर गरेर आफ्नो समर्थन दिएका छन्। ऋतिकले आफ्नो पोस्टमा लेखे ‘मेरो प्यारो आर्यन, जिन्दगी एउटा अनौठो यात्रा हो। यो पनि धेरै राम्रो छ, किनकि यो अनिश्चित छ। भगवान दयालु हुनुहुन्छ। उहाँले सबै भन्दा कठिन चीजहरु सबै भन्दा कठिन मानिसहरुलाई दिनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ की भगवानले त्यती बेला हामीलाई छान्नुहुन्छ जतिबेला हामी सबैभन्दा मुस्किल समयमा हुन्छौं । तपाइँ कठिन परिस्थितिको बीचमा आफैंलाई सम्हाल्नको लागी दबाब महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
ऋतिक रोशनले अझै अगाडी लेख्छन् मलाई थाहा छ तपाइँले अब यो महसुस गर्नुभएको हुनुपर्छ। क्रो ध, भ्रम, असहायता। यी चीजहरु हुन् जुन तपाइँ भित्र बाट एक नायक बाहिर ल्याउन आवश्यक छ। तर सावधान रहनुहोस्, किनकि यसले अन्य सबै राम्रो चीज दया र माया लाई पनि न ष्ट गर्न सक्छ।
अभिनेताले यो पनि लेखे( गल्ती, असफलता, जीत, सफलता ।।। यी सबै चीजहरु उस्तै हुन् तपाइँ आफुसंग के राख्ने त्यो तपाईले नै आफ्ना लागि छान्ने हो । तपाइँ ती सबै संग राम्रो चिजहरु संगै अगाडी बढ्न सक्नुहुन्छ। म तिमीलाई एक बच्चाको रूपमा जान्दछु। मँ एक मानिसको रूपमा जान्दछु। यसलाई लिनुहोस्। तपाइँले अनुभव गर्नु सबै कुरा अँगाल्नुहोस्। यो तपाइँको उपहार हो।ू
Previous articleयी खानाहरु नियमित बढी खाए सिधै हुन्छ मृ’गौला ड्या’मेज
Next articleयौ; न, इ; च्छा, बढाउन चाहानुहुन्छ ? च्लिच्क गर्नु!
फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ह्वाट्सएप एकसाथ ६ घण्टासम्म डाउन किन कसरी भयो ?